Jikọtara Ego, Coupon, na Ego Usoro Ngwọta | Martech Zone
Koodu ego bu uzo di nma iji kpalie onye obia. Ma ọ bụ nnukwu ego ma ọ bụ naanị mbufe n'efu, ego nwere ike ime ihe dị iche. N'oge gara aga, anyị na-ewuru ha onwe anyị iji akara ngosi barcode wee soro ha na adreesị ozi-e. Ọ bụghị ihe ọchị… ọkachasị mgbe ị gbakwunye mgbagwoju anya nke ọtụtụ mgbapụta, nkesa koodu, wdg. Ọzọkwa, Akara ókwú na-arụ ọrụ dị ukwuu n'ịntanetị, mana anyị ga-ewulite onyonyo nke ha nke ọma maka email.
A na-emetọ ego ego, ego na koodu coupon, yabụ ikpo okwu maka ịchụ ha dị mkpa. A tụlere usoro abụọ na nso nso a na email nzukọ Abụ m nke:
iVoucher - Ulo ahia ahia
iVoucher na-enye gị ohere ijikwa ma debe akwụkwọ ego gị niile, coupon na koodu ego site na otu, ikpo okwu akwadoro.
Mepụta akwụkwọ ego - Wupụta akwụkwọ ego mara mma na-akpaghị aka kachasị maka email, weebụ, mmekọrịta na ekwentị site na iji njirimara ọrụ ha.
Bipụta Akwụkwọ Ego - Kwusaa ndepụta ego gafee ọtụtụ ọwa n'otu oge iji nweta oke iru.
Weghara data - Data weghaara site na aha ọdịda peeji nke na-enye gị ohere ijikwa mmekọrịta ndị ahịa n’etiti ikpo okwu.
Gbapụta Kupọns - Gbapụta ndepụta ego nke ọma na ezigbo oge, n'ịntanetị na ụlọ ahịa.
akuko - Comprehensive akuko arụmọrụ pụtara na ị nwere ike weghara ma jikwaa ọ bụla ahịa mmekọrịta gị vouchers.
Ego - Ahịa API
Maka ndị gị nke ga-achọ ịmepụta azịza siri ike ma jikọta ya n'ime, Nyochaa na-enye ihe siri ike API ịbanye, soro, ma gbapụta koodu dere site na isi mmalite ọ bụla.
Site na REST API ha, enwere ike itinye onu ogugu na weebụsaịtị (JS SDK nke onye ahia, kwadoro wijetị ndenye ego), ngwa mkpanaka (gam akporo na iOS SDKs), ma obu azu azu (PHP, Ruby, Node.js, Java SDKs, Node) .js sample ngwa) nke ikpo okwu gi. SDKs siri ike dị niile.
Pịa site na ngosi ngosi ndụ:
Nweta nnwale ọnwa 3 nke Voucherify!
Tags: APIcoupon apiKoodu deremgbapụta mgbapụtaKoodu egoKoodu mechiechimpKoodu ego ego mailchimpmgbapụtandepụta ego mgbapụtausoro egonyegharịa
Jul 18, 2016 na 4: 16 AM
Ndewo Douglas, daalụ maka ịdepụta anyị. MarketingTech Blog ndị na-agụ nwere ike ịnweta koodu mgbasa ozi pụrụ iche maka ọnwa 3 ịdenye aha n'efu nke Voucherify Ebe a http://redeem.voucherify.io/marketingtech